ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံဘူဒိုဇာ TY230-3 - တရုတ် Xuanhua ဆောက်လုပ်ရေးစက်
TY230-3 ဘူဒိုဇာ Semi-တင်းကျပ်ဆိုင်းငံ့, ဟိုက်ဒရောလစ်လွှဲပြောင်း, ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်လမ်းကြောင်းအမျိုးအစားဘူဒိုဇာဖြစ်ပါတယ်။ Planetary, Unilever operated ဖြစ်သည့်အာဏာကိုပြောင်းကုန်ပြီဂီယာ။ လူ့ခြင်းနှင့်စက်အင်ဂျင်နီယာအဆိုအရဒီဇိုင်းစစ်ဆင်ရေးစနစ်အားထိရောက်စွာနှင့်တိကျစွာပိုမိုလွယ်ကူစွာလည်ပတ်စေသည်။ အားကြီးသောတန်ခိုး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမြင့်မားစစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်ရှုမြင်အားသာချက် features တွေပြသပါ။ optional ဦး-ဓါး (စွမ်းဆောင်ရည် 8.1 m³), ​​သုံး Shanks ripper, ROPS နှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများလည်းပါဝင်သည် ...
TY230-3 ဘူဒိုဇာ Semi-တင်းကျပ်ဆိုင်းငံ့, ဟိုက်ဒရောလစ်လွှဲပြောင်း, ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်လမ်းကြောင်းအမျိုးအစားဘူဒိုဇာဖြစ်ပါတယ်။ Planetary, Unilever operated ဖြစ်သည့်အာဏာကိုပြောင်းကုန်ပြီဂီယာ။ လူ့ခြင်းနှင့်စက်အင်ဂျင်နီယာအဆိုအရဒီဇိုင်းစစ်ဆင်ရေးစနစ်အားထိရောက်စွာနှင့်တိကျစွာပိုမိုလွယ်ကူစွာလည်ပတ်စေသည်။ အားကြီးသောတန်ခိုး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမြင့်မားစစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်ရှုမြင်အားသာချက် features တွေပြသပါ။ optional ဦး-ဓါး (စွမ်းဆောင်ရည် 8.1 ပါဝင်သည် m³), three shank ripper, ROPS and other equipments. It is your best choice for road building, hydro-electric construction, field modification, port building, mine development and other constructions.
(အပါအဝင်မဟုတ် ripper) စစ်ဆင်ရေးအလေးချိန် ( ကီလိုဂရမ်) 24840
မြေပြင်ဖိအား (K သည် Pa ) 76
track gauge (မီလီမီတာ) 2000
min ။ မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) 405
စွမ်းရည် Dozing ( မီတာ ³) 7.8
Blade ကိုအကျယ် (မီလီမီတာ) 3666
မက်စ်။ တူးအတိမ်အနက် (မီလီမီတာ) 540
ယေဘုယျအားရှုထောင့် ( မီလီမီတာ ) 5733× 3666×3380
Flywheel ပါဝါ ( K သည် W က / HP က ) 169/230
မက်စ်။ torque (N ကို • မီတာ / rpm ပါ) 1050/1400
N ကို လမ်းကြောင်း roller ၏ umber ( တစ်ဦးချင်းစီ အခြမ်း) 7
W က ဖိနပ်၏ idth (မီလီမီတာ) 560
ရှေ့ဆက် (km / h) 0-3.8 0-6.8 0-11.8
ယခင်: ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံဘူဒိုဇာ TY165-3
နောက်တစ်ခု: ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံဘူဒိုဇာ TY320-3
220hp crawler ဘူဒိုဇာ
320hp Track ဘူဒိုဇာ
Bull Dozer ဘူဒိုဇာ
ဘူဒိုဇာ Track ကြိတ်စက်
crawler ဘူဒိုဇာ Sd13s 130 HP
crawler Dozer ဘူဒိုဇာ
ကလေးတွေကရော်ဘာ Track ဘူဒိုဇာ
လူကြိုက်အများဆုံးနယူး Track ဘူဒိုဇာ
Sd13s Wetlands ဘူဒိုဇာ
Sd22s Wetlands ဘူဒိုဇာ
Shantui crawler ဘူဒိုဇာ
Shantui crawler ဘူဒိုဇာ Sd13s
Track ဖိနပ်နှင့်အတူ Shantui crawler ဘူဒိုဇာ
Shantui Wetlands ဘူဒိုဇာ Sd16l
ကြောင် D6r Lgp Track ဘူဒိုဇာအသုံးပြု
Wetlands Earthmover crawler ဘူဒိုဇာ
multi-function ကိုဘူဒိုဇာ TS165-2
ဖက်စ်: +86 313 3186027
E-mail ကို: hbxg_bulldozer@163.com
HBXG နှင့်ရုရှားသီးသန့်အေးဂျင့် RBA comp ...
ဇွန်လ 5, 2018 တွင်, HBXG နှင့်ရုရှားသီးသန့်အေးဂျင့် RBA ကုမ္ပဏီတို့ပူးတွဲ၏ Novokuznetsk မွို့၌ကျင်းပသည့်အကြီးဆုံးနှင့်သြဇာအရှိဆုံးကျောက်မီးသွေးသတ္တုတွင်းပြပွဲသော Ugol Rossii သတ္တုတွင်းပြပွဲ, ပါဝင်ခဲ့ ...